ဆေးခြောက်အစအနများကိုအွန်လိုင်းမှတရားဝင်ဝယ်ယူခြင်း - ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များလွယ်ကူစွာလမ်းညွှန်ခြင်း
Delta-8 THC ကိုကြိုးစားကြိုးစားလိုသည်
ပေါင်းပင်အစေ့များကို ၀ ယ်ရန်တရားဝင်ပါသလား
ဆေးခြောက်အစေ့များကိုအွန်လိုင်းဝယ်ယူ သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ တရား ၀ င်မှုရှိနိုင်သည်။ ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များအွန်လိုင်းရောင်းချမှု၏တရားဝင်မှုကိုအနှစ်ချုပ်ရန်ပြည်နယ်သည်တရားဝင်ဆေးခြောက်ကိုခွင့်ပြုခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ပင်ပါ ဆေးခြောက်ရှေ့နေ ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များ ၀ ယ်ရန်သင့်အတွက်တရား ၀ င်မှုရှိ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုမကြာခဏ update လုပ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်သည်တရားဝင်ဆေးရုံလူနာများအတွက် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလတွင်အိမ်တွင်ကြီးထွားလာသည်။ ဆေးခန်းများမှဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုအီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သီအိုရီအရဆေးခန်းမှသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ရောင်းချနိုင်သောဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုခွင့်ပြုသည့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ဥပဒေမှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဒေသန္တရဥပဒေများကိုစစ်ဆေးပါ။ တရားဝင်ပြည်နယ်များသည်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များအားဆေးခွင့်လိုင်စင်ရဆေးခန်းသို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ပျိုးခင်းများမှတရားဝင်ရောင်းချခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များအားတရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏ဆေးခြောက်ဥပဒေမှနမူနာဖြစ်သည်။
ဆေးခြောက်အစေ့များကိုအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသွားပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များမှရွေးချယ်ပြီးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ အသံထွက်ပေမဲ့မလွယ်ဘူး
သင်သည်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေသောအခါထပ်မံသွားပါကလူများကိုအွန်လိုင်းမှလိမ်လည်နေသည့်နေရာများစွာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များနှင့်သူတို့၏အားကောင်းသည့်သက်ရောက်မှုများကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ သို့သော်နောက်ခံများ၏နောက်ခံသည်အလွန်မှေးမှိန်သည်။
မည်သည့်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်မဆိုသက်ဆိုင်ရာရင်းမြစ်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်၏ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရောင်းချရန် ၀ မ်းသာသည်ထက်များသောအားဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာများစွာရှိနိုင်သည်။ များစွာသောသူတို့က၎င်းသည်တရားဝင်သည်ဟုဆိုလိမ့်မည်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင်သင်သည်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များ ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာကိုမည်သို့ရှာရမည်နှင့်သင်အိမ်၌ရှိပါကမည်သို့လျော်ကန်စွာအသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရမည်။
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးယန္တရားမှဤမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်လလျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအကြိမ်များစွာသင်မေးနေသည့်မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိပ်ဆုံးရလဒ် ၃ ခုရှိသည် တရားဝင်အွန်လိုင်းဆေးခြောက်မျိုးစေ့ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ.
တစ်ခါတစ်ရံသင်ရှားရှားပါးပါးနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောမျိုးကွဲများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဆေးခြောက်မျိုးစေ့စည်းမျဉ်းများကိုသင်၏ပြည်နယ်အတွင်းတွင်အမြဲရှာဖွေသင့်သည်။ တရား ၀ င်ခွင့်မပြုသောမျိုးစေ့အမျိုးအစားကိုသင်တွေ့ရှိသောအခါ၊ သင်၏ပြည်နယ်အတွင်းရှိအခြားတရားဝင်တရားဝင်မျိုးစေ့များကိုရှာဖွေရန်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
သင်အမှန်တကယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်။ ယခင်အသိပညာရှိခဲ့ကြသောအခါအွန်လိုင်းဆေးခြောက်မျိုးစေ့များဝယ်ယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ပြည်နယ်အတော်များများတွင်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောဆေးခြောက်အမျိုးအစားများကိုတရားဝင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ သင်သည်ဆေးခြောက်အစေ့များကိုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေသောအခါမှန်ကန်သောလမ်းညွှန်ကိုသုံးပါ။
အချို့ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များသည်စျေးကွက်တွင်အဘယ်ကြောင့်ဈေးကြီးနေသည်ကိုထင်ရှားစေသည်။ ဤရွေ့ကားရှားပါးမျိုးကွဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအလွန်လှည်, ထို့ကြောင့်မျိုးစပါးအများအပြားအလွန်စျေးကြီးသည်အဘယ်ကြောင့်။
သင်ပိုမိုအဆင့်တစ်ဆင့်သွားပြီးသင်အကြိုက်ဆုံးဆေးခြောက်မျိုးစေ့များစာရင်းကိုဖန်တီးသောအခါ THC ပါ ၀ င်မှုမြင့်မားသောအရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ အကြောင်းအရာသည် ၀.၃% ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါကအခြားအရာများအတွက်သင်သွားသင့်သည်။
မတူညီသောပြည်နယ်များတွင်အများဆုံးရရှိနိုင်သည့်မျိုးစေ့များကိုသင်တွေ့ရှိပါကစျေးနှုန်းမှာလည်းပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ အချို့သောမျိုးကွဲများတွင်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုအွန်လိုင်းရှာဖွေသည့်အချိန်တွင် ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားပါကစျေးနှုန်းတက်နိုင်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ရရှိရန်အတွက်သင်သည်ဆေးခြောက်ကြီးထွားမှုအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းရှိသည့်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ ဒီမျိုးစေ့မျိုးတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာရနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မင်းလိုအပ်တာနဲ့အညီအကောင်းဆုံးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
ယခုအခါစျေးကွက်တွင်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်တည်ရှိနေသည်။ ဤမျိုးကွဲများကိုအများအားဖြင့်သင်တရားဝင်မျိုးစေ့များကိုတရားဝင်ဖြန့်ဝေနိုင်သောနေရာများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ အချို့သောပြည်နယ်များတွင်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကိုင်တွယ်ရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်စွာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကို ၀ ယ်ယူရောင်းချခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်တရားဝင်သည်။
သင်သည်ဆေးခြောက်စည်းမျဉ်းများကိုထပ်မံလိုက်နာလိုပါကကုန်ပစ္စည်းကိုလောင်ကျွမ်းရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကတ်ပြားများကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ သင်၏စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးအနေဖြင့် - သင့်ပြည်နယ်ရှိဥပဒေများကိုအမြဲလိုက်နာပါ။
ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များအွန်လိုင်းတွင်မျိုးစုံပါ ၀ င်သည်။ စျေးအသက်သာဆုံးအစီအစဉ်များအနက်တစ်ခုမှာအစေ့ ၁၀ ခုပါ ၀ င်ပြီးသတိနှင့်ဂရုတစိုက်ထုပ်ပိုးထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်များစွာသောသေတ္တာများကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီးသင်အလိုရှိသည့်မျိုးကွဲများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ မျိုးစေ့မျိုးကွဲများမသင့်လျော်ပါကသင်သည်ပြန်လည်ငွေပြန်အမ်းမည်ဆိုပါကဆေးခြောက်အစေ့များကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
ဤသည်မှာအနုပညာ "marihuana" ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေအရထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေအောက်ရှိဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရေးသားချိန် - ဇွန် ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀
ရွေးချယ်စရာများစွာ၏ခေတ်တွင်သင်ဟာအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပြီးစျေးကွက်တွင်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားတဲ့ထုတ်ကုန်များကိုသာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအွန်လိုင်းဆေးခြောက်မျိုးစေ့များဝယ်တဲ့အခါ, ဆေးခြောက်ကြီးထွားမှုအတွက်စံပြအစေ့ကိုရှာဖွေ, နှင့်အွန်လိုင်းဆေးခြောက်မျိုးစေ့ပူဇော်သက္ကာကိုမှကြွလာသောအခါသင်၏ဘတ်ဂျက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစျေးနှုန်းရှိသည်။
သငျသညျအွန်လိုင်းဆေးခြောက်အစေ့ကိုဝယ်ချင်ပေမယ့်တရားဝင်လုပ်ပါ youtube channel မှတရား ၀ င်အကြံဥာဏ်ရယူသင့်ကြောင်းသင်မည်သည့်နည်းလမ်းမှမရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်လူများကမူအီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်တရား ၀ င်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမေးမြန်းခြင်းကို ဆက်၍ တောင်းဆိုနေကြပြီး၊ နောက်ပြည်နယ်ရှိလူတိုင်းသည်လည်းထိုအချက်အလက်ကိုလိုချင်ကြလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့တူသလိုပဲ ...
သင်၏ဥယျာဉ်ကြီးထွားမှုကိုသင်မည်သို့ရနိုင်သည်ကိုပြောကြပါစို့။ ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးစာရင်းသွင်းလိုက်သည်။ အိမ်ကြီးထွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ပြည်နယ်ဥပဒေကိုစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။ ဤတွင် IL ၌ဆေးကုသမှုခံယူသောလူနာများသာကြီးထွားနိုင်သည်။ သူတို့ကမျိုးစေ့တွေ ၀ ယ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သင်ဘယ်နေရာမှာရလဲ - ပြီးတဲ့အထိဆွဲပြီး၊ ဆေးခြောက်အပင်တွေဟာတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူတွေဖြစ်ပြီး၊ ပြည်နယ်သင်ကအပင်ပေးပါ။
သင်၏ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတွက်သင်၏ဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကြီးထွားလာခြင်း - သို့မဟုတ်သင့်ပြည်နယ်ကခွင့်ပြုပါကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်သူအိမ်သားများကြီးထွားလာခြင်း - နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး IL နှင့် WA ကိုမကြာမီတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်ဆုတောင်းနေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်အရာ ၅ ချက်အကြောင်းပြောပါမည်။ သို့သော်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အိမ်တွင်ကြီးထွားရန်သတိထားပါ - မကြာခဏ DEA တွင်ပါ ၀ င်သည် - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်အိမ်တွင်ကြီးထွားလာပြီးသောနောက်တွင် CO ကဲ့သို့သော CO သည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြည်နယ်များတွင်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။
မျိုးစေ့တွေ ၀ ယ်တဲ့အခါစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲ။
သင့်ရဲ့ကန့်သတ်ကျော်မသွားပါနဲ့။ သင်၏ဆေးကိုဘေးကင်းစွာအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ၊ မည်သည့်ပြtroubleနာမျှမလိုပါ၊ - ဂလန်းကီးလင်းကဲ့သို့ပင်သူသည်ကြီးထွားလာသောဆေးဝါးကိုသာရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်များတိကျတဲ့ကန့်သတ်ထား - သူတို့ကိုကပ်။ ဥပမာအားဖြင့် IL သည်လူနာများကိုအိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်အပင် ၅ မျိုးကိုကြီးထွားခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်သင်၌မည်သည့်အပင်များရှိမည်ကိုကြည့်ပြီးသင်မည်မျှမျိုးစေ့မည်မျှဝယ်ယူပါစေ၎င်းကိုကပ်ထားပါ။
ဆေးခြောက်အစေ့သို့မဟုတ် Cannabis ကိုသင်မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူပါသနည်း။
အီလီနွိုက်စ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုဥပဒေအသစ်တွင်ဆေးများမှသင်အစေ့များကို ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်အချို့ဆေးခန်းများမှပန်းပင်ကိုသင်မဝယ်နိုင်တော့ပါ။ သို့သော်ဤအရာသည်သင်ကြည့်နေစဉ် ၂၀၂၂ ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းယခုသင့်ပြည်နယ်သည်ဆေးခြောက်မှထွက်လာပြီးသင်သွားမျိုးစေ့များကိုဆေးခန်းတစ်ခုဝယ်ယူလျှင်အိမ်ပေါက်ရန်ခွင့်ပြုထားသော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမရှိပါ။
ကောင်းပြီ၊ မျိုးစေ့များကိုမည်ကဲ့သို့သတ်မှတ်ထားသနည်း။ သူတို့ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်ဘာကြောင့်ဝယ်ယူနိုင်သနည်း။ ထိန်းချုပ်ထားသော ၀ တ္ထုများအက်ဥပဒေသည်ဆေးခြောက်ကိုကြီးထွားမှုဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေဆေးခြောက်စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်ယင်းတို့၏အစေ့များဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
ဆေးခြောက်အစေ့များသည်အမှန်တကယ် Hemp Seeds ဖြစ်သောကြောင့်တရားဝင်ဖြစ်ပါသလား။
သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင်စိုက်ပျိုးလျှင်ပိုမိုမြင့်မားသော THC ထက် 2018% THC ရှိသည်သော 0.3 ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းကိုဆေးခြောက်စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်၎င်း၏မျိုးစပါး cultivars - သို့မဟုတ်မျိုးကွဲများအတွက်လုပ်ဖို့လျှော်တရားဝင်။ ထို့ကြောင့်မျိုးစေ့တွင် ၀.၃% ထက်ပိုသော Delta-0.3 THC ရှိပါက၎င်းသည်တရားဝင်လျှော်ကြေးမျိုးစေ့မဟုတ်ပါက၎င်းသည် CSA မှတားမြစ်ထားသောတရားမဝင်ဆေးခြောက်မျိုးစေ့ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ဥပဒေများကမျိုးစေ့များနှင့်ကိုယ်ပွားများအပါအဝင်မည်သူရောင်းချနိုင်သည်ကိုသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောပြည်နယ်များသည်၎င်းတို့၏လယ်သမားများကို၎င်းတို့၏မျိုးစေ့များကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှရောင်းချခွင့်ပြုရမည်၊ သို့မဟုတ်ကနေဒါမှခွင့်ပြုရမည်၊ သို့သော်ဥရောပ၊ အမ်စတာဒမ်နှင့်ဘာစီလိုနာတို့တွင်သင်ဤမျိုးစေ့များကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်အမှန်တကယ်အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော်သူတို့၏ဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသောဗဟိုချက်ပြရုံများ - ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် - နိုင်ငံ၏မြို့တော် - ကြီးကျယ်သောအီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်သင်၏ပြည်နယ်သည်အွန်လိုင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုသာပြသလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းဆေးခြောက်မျိုးစေ့များကို ၀ ယ်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့တွင်ဤတွင်ပါရှိသည် -
တဖန် youtube မှတရားဝင်အကြံဥာဏ်မရရှိသေးပါ - သို့သော်ဥရောပ၌အစေ့များကိုရောင်းသောနေရာများရှိသည်
ဥရောပ၌ Cannabis မျိုးစေ့များကိုမည်သည့်နေရာတွင်တရားဝင်ရှာရမည်နည်း
တောင်ပိုင်း Humboldt မျိုးစေ့စုပေါင်း
Dude, ငါမင်းကိုတရားဝင်အကြံဥာဏ်တွေပေးနေတာမဟုတ်ဘူး၊ သင်ဟာတောင့်တင်းခိုင်မြဲပြီးပုံမှန်မျိုးစေ့များနှင့်အတူသွားလိုခြင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံရန်နှင့်သူတို့၏ဓာတ်ပုံကာလအတွင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းရန်အတွက်ပန်းပွင့်များမှတစ်ဆင့်လေ့ကျင့်ရန်လိုသည်။ သို့မဟုတ်ထိုအရာအချို့ကိုကျော်။ အမျိုးသမီးမျိုးစေ့များနှင့်အတူသွားလိုခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ သင်၏ပထမဆုံး autoflower တွင်အစပြုသူ။
မျိုးစေ့ဘဏ်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ မျိုးဗီဇပညာရှင်များကိုယ်တိုင်ကသူတို့၏မျိုးစေ့များအကြောင်းပြောပြမည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေရန်သင့်အတွက်မှတ်ချက်များမှလင့်ခ်များ - ထို့နောက်သူတို့၏ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်စကားပြေတွင်မီးဟုခေါ်သောဖျားနာနေသောပန်းပွင့်များ၏ instagram အကောင့်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး - သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သူတို့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့စာရင်းပေးမယ်။ ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်မည်မျှထိရောက်သနည်း။ အလေးချိန်။ တစ် ဦး ဆေးခြောက်အမျိုးအနွယ်ကိုအလေးချိန်ဘယ်လောက်?
ဆေးခြောက်အစေ့တစ်မျိုးလျှင် ၁.၅-၂.၅ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိသည်။
Soo .. ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ - IL ဟာ ၂၀၁၆ မှာ ၁၀ ဂရမ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ဘယ်ကနိဂုံးချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ - ယခုမည်သို့အဖြေ ဆေးခြောက်အပင်များမှော်အသစ်ပြည်နယ်များသို့ရ မနေ့ကပြစ်မှုဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်း။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းလွဲ ၂း၀၀ တိုင်းတွင်ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်းကိုသင်သတိပြုမိမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြိုက်ပါကစာရင်းသွင်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါ။
ငါ့ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ - အင်တာနက်အမှားပဲ။ ဆေးခြောက်မျိုးစေ့တွေအကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။